हामी संकटमा छौँ, हाम्रो पृथ्वी संकटमा छ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
हामी संकटमा छौँ, हाम्रो पृथ्वी संकटमा छ
२०७१ जेष्ठ २३, शुक्रबार ००:४२ गते
वनस्पति जगत र प्राणी जगत, यी दुई जगतबीच अत्यन्त ठूलो सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । यी दुई एकअर्काको पूरक त¤वका रुपमा रहेकाले हिन्दू दर्शनशास्त्र वेदमा दुवै जीवको संरक्षणका लागि अनेकौँ धर्मग्रन्थ एवं मन्त्रसँग जोडिदिएर सदाका लागि हित हुने कार्यमा जोड दिएको पाइन्छ । विश्व मानचित्रलाई सदा टिकाइराख्नका लागि वेदमा उल्लेखित विषयहरु अत्यन्त सान्दर्भिक छन् । पृथ्वी, आकाश, हावा, पानी, सूर्य, बोटबिरूवा र चराचर आदिको पूजालाई सम्पूर्ण जीव, जगत र वातावरणलाई बचाइराख्नु भन्ने बुझिन्छ ।
गाईको पूजा किन ? गाईको दूधले मानवहित र अमृतको काम गर्छ । गाईको गोबर र गहुँतले जीवहरुको अहित गर्ने शत्रु जीवहरुलाई मारिदिने काम गर्छ र वनस्पति जगतका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न प्रदान गरिदिन्छ । वर, पीपल र तुली आदिको पूजा किन ? जीवनहरुको जीवनचक्र पनि अचम्मको छ, जति बुझे पनि बुझेरै नसकिने । क्षणभरमा मर्नेदेखि लिएर हजारौँ वर्षसम्म जीवित रहने जीवहरु यस धर्तीमा रहन्छन् । सबै जीवलाई बाँच्नका लागि अक्सिजन चाहिन्छ, जसको श्रोत नै वनस्पति जगत हो । प्राणीहरुका लागि नचाहिने पदार्थ कार्बन डाइअक्साइड आफूले लिएर प्राणीका लागि नभई नहुने त¤व अक्सिजन दिने काम बोटबिरूवा र वनस्पति जगतले गर्दछ । त्यसैले, बोटबिरूवाको पूजा गरेर सदाका लागि संरक्षण होस् भन्ने उद्देश्यले धार्मिक नियम बनाइदिएको बुझिन्छ ।
पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश र सूर्यको पनि वनस्पति जगत र प्राणी जगतसँग त्यति नै मह¤व हुने भएकाले ती वस्तुहरुको संरक्षणका लागि वेदमा धार्मिक नियम बनाइदिएको हो । भगवान् कृष्णको धेरैजसो जीवनलीला गाई र ग्वालामा, गोपिनी, पीपलबोट र तलाउमा रहेको देखिन्छ । त्यसभित्रको रहस्य पनि माथि उल्लेखित वनस्पति जगत र प्राणी जगतबीचको घनिष्ट सम्बन्धजस्तै भन्ने बुझाउँछ ।
आधुनिक जीवन फरक ढंगबाट चल्न थालेको छ । विज्ञानमाथिको विकास भनेर सारा संसारलाई भौतिकमय बनाइदिएको छ । प्रकृतिलाई क्षतविक्षत पारिदिएको छ । गाईलाई पूजा होइन, बफको भेराइटीमा परिणत गराइदिएको छ । बोटबिरूवाको पूजाको सट्टा त्यस ठाउँमा आधुनिक गगनचुम्बी भवनहरु ठडिन थालेका छन् । हिमाल, पहाड, डाँडापाखा र त्यसअनुसारको फलफूल र बोटबिरूवाहरुले जुन सुन्दरता बनाइराखेको थियो, अब बिस्तारै ती वस्तुहरुको लोपका कारण सबै ठाउँ कुरुपतामा परिणत हुँदैछ । विकासका नाममा प्रत्येक डाँडापाखालाई चिराचिरा पार्ने काम भएको छ । हिमाल, पहाड र डाँडापाखामा पाइने अमूल्य बोटबिरूवा, जडीबुटी र जीवजन्तुहरु द्रुत गतिमा लोप हुने क्रममा छन् ।
चार दशकअघिसम्मको नेपालको मौसमलाई स्मरण गर्दा हामी पाउँथ्यौँ, वैशाखदेखि भाद्रसम्म अत्यधिक वर्षा हुने गथ्र्यो । हिमालमा अत्यधिक हिमपातले गर्दा उत्तरतर्फको दृश्य कुनै निपूर्ण चित्रकारले बनाएको सुन्दर चित्र टाँगिदिएजस्तै देखिन्थ्यो । हरेक डाँडापाखामा हरिया बोटबिरूवा, फलफूल र जडीबुटीहरुले कुनै नवआगन्तुक पाहुनालाई स्वागत गर्न लागेजस्तै देखिन्थ्यो । हरेक डाँडाका चुचुराहरुबाट बत्तिएर तल थचारिँदा देखिने झरना पानीको त्यस दृश्यले बनाइदिएको वातावरणमा आफ्नै किसिमले रमाउने धोबी चरो, मयूर, हरिण, मृगलाई अब कल्पनासम्म मात्र गर्न सकिने भयो ।
वास्तविकता विगतको भन्दा फरक भैसकेको छ । लामो समयसम्म सुख्खा र जलप्रकोपका कारण जलवायुमा परिवर्तन देखिन थालेको छ । हिमालमा रहेका हिउँ पग्लने क्रम बढ्दो छ । नेपालमा २÷३ वर्षयता हिमपहिरोबाट धेरै स्वदेशी र विदेशी नागरिकको ज्यान गुमेको छ । धेरै भौतिक सम्पत्तिको नाश भएको छ ।
नेपालको पहाडी भेगमा दिनप्रतिदिन समस्या थपिँदैछ । विगतदेखि नदीनाला, कुवा, कुलो र झरनाहरु धेरै सुकिसकेका छन् र बाँकी भएका पनि सुक्ने क्रममा छन् । कहिल्यै नदेखिएको हानिकारक कीटपतंग आदिको उत्पत्तिका कारण अमूल्य जैविक वनस्पतिहरु मासिने क्रममा छन् । फलफूल, अन्नबाली र अन्य खाद्य पदार्थको उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ । प्रकृतिको विपरीत मान्छेले चाहेर केही हुनेवाला छैन । विश्वमा बढ्दो औद्योगिकीकरणसँगै तापक्रमको वृद्धिका कारण उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा असर पारेको छ ।
अमेरिकी वैज्ञानिकहरुको संस्था नासाले हालै गरेको अध्ययनअनुसार पृथ्वीको ध्रुवीय क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दै गरेको तथ्य समाचारमा आएको छ । उक्त ध्रुवीय क्षेत्रमा हिउँ पग्लने गति बढ्दै गएकोमा विश्वभरका वातावरण तथा पर्यावरणविद्हरु चिन्तित देखिन्छन् । विश्वको तापक्रम सरदर प्रतिदशक ०.१ देखि ०.३ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म बढ्दै गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा सरदर तीन–चार गुणासम्म तापक्रम वृद्धि रहेको अध्ययनले देखाउँछ ।
हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा गर्मीको समय बढेको र जाडोको समय छोट्टिएकाले थुप्रै समस्या देखिन थालेको छ । चैत्र–वैशाखमा फुल्ने लालीगुराँस माघमै फुल्ने र हिमालको तल्लो भेगमा बस्ने जीवजन्तुहरु बिस्तारै माथिल्लो भागमा गई बस्न थालेको र चराहरुले पनि छिट्टै फूल कोरल्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । उद्योगधन्दा कलकारखानालगायत अन्य हरितगृह ग्यासको मात्रा वायुमण्डलमा बढ्दै जाँदा ओजोन तहमा प्वाल पर्ने क्रम वृद्धि हुँदा भविष्यमा पृथ्वीमा ठूलो संकट पैदा हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार दक्षिण एसियामा ब्ल्याक कार्बनको उत्सर्जन बढी देखाइएको छ । दाउरा बाल्दा, डढेलो लाग्दा तथा डिजेल इन्जिनबाट निस्कने धूवाँ–धूलोका कारण नै ब्ल्याक कार्बन हो । हिउँ पगाल्नमा ब्ल्याक कार्बनको भूमिका अरु ग्याँसको भन्दा बढी हुने देखाइएको छ । भारत र चीनले २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म ब्ल्याक कार्बन उत्सर्जन गर्ने गरेकोमा त्यसको सबैभन्दा बढी असर नेपालको हिमाललाई पार्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
हामी संकटमा छौँ । हाम्रो पृथ्वी संकटमा छ । यही क्रम बढ्दै जाने हो भने सिंगो पृथ्वी मरूभूमीकरण हुने निश्चित छ । हावा, पानी, जीवजन्तुबिनाको संसार कस्तो संसार होला ? हामी कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौँ । त्यस भयावह स्थितिबाट बचाउनका लागि तपाईं–हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ, त्यो गरौँ । कम्तीमा पनि एउटा बिरूवा रोपौँ, संरक्षण गरौँ र वातावरणलाई असर पार्ने कामप्रति सबैलाई सजग गरौँ । यही हो मानवधर्म, यो भन्दा ठूलो धर्म अरु केही हुनेछैन ।